Global Voices teny Malagasy » MySQAR: Tambajotra Sosialy Voalohany An’i Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jona 2018 2:13 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Morris Nandika miora
Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny Aprily 2014
Ny vinan'ny MySQUAR dia ny hampifandray ny teratany Birmana rehetra amin'ny vovonana sosialy azo ihorirànana. Mba hamoronana toerana iray hahafahan'ireo teratany Birmana mihaona, mifandray ary mizara tsy misy sisintany na fetra.
Io no fijery ao ambadik'ilay vovonana media sosialy MySQUAR  amin'ny fiteny Birmana. Naorin'i Rita Nguyen tamin'ny taona lasa, nitombo be tao anatin'ireo volana vitsy lasa teo ny fampiasana azy
Ny tambajotra sosialy MySquar napetraka ho an'i Myanmar, MySosial
Fony nanomboka ny tetikasa izy, hoy ny nambaran'i Nguyen tao anaty tafatafa iray, dia niandrandra ny hahita mpampiasa somary sy dia manahirana miasa amina fahazoana fidirana ambany be. Latsaky ny 1% ny fidirana amin'ny aterineto ao Myanmar (na Birmania), araka ny Wikipedia , ny ankamaroany dia azo avy amin'ireo toerana sady fisotroana kafe no misy aterineto ireny.
Kanefa, tsy araka izay noheverin'i Nguyen akory, fa ireo olona vitsivitsy izay tafiditra koa dia tena faran'izay manan-talenta indrindra amin'ny resaka teknolojia. Ity andian-taranaka tanora ity dia faritany ho toy “ireo mpijirika satria tsy maintsy izay izy ireo”, satria ny safidin'izy ireo amin'ny fidirana amin'ny aterineto dia tena voafetra.
Sakana telo goavana no hitan'i Nguyen amin'ny fidirana ho an'ireo mpanjifa teknolojia: ireo fetra apetraky ny governemanta amin'ny fahalalahana maneho hevitra, ireo fetra ara-pitaovana toy ny fahafahana miditra na ireo teknolojia, ary ny fetra noho ireo antony ara-kolontsaina, sahala amin'ny fiteny.
Ireo Politika sy ny Maha-izy
Tsy nahita olana avy amin'ny governemanta i Nguyen raha resaka sivana. Voalazany fa tsy manana ahiahy ireo tanora amin'ny fizaràna ny vaovao ary misy fironana goavana mankany amin'ny fakàna sy fizaràna selfies, ary fanehoana ny maha-izy azy manokana ny olona iray.
Fony natomboka ny MySQUAR tamin'ny volana Jona 2014, hevitra tapaky ny ekipa ny hitaky ny anaran'ireo mpampiasa ny tarika, fa tsy ny tena anarana akory, toy ny ataon'ny Facebook, mba hitazonana ny fiarovana amin'ny lafiny sasantsasany sy ny tsy fitononana anarana. Kanefa, taorian'ny fametrahana azy tamin'ny tambajotra, marobe ireo fangatahana voarain'izy ireo mikasika ny fanovàna an'io fepetra io, avy amin'ireo mpampiasa maniry ny hanome ny tena anarany ho fantatry ny daholobe.
Vinavinain'i Nguyen fa ampahany vokatry ny laza amin'ny fandefasana an'ireo sarisary na ireo tononkalo eo amin'ny MySQUAR io, sy ireo mpampiasa izay maniry te-ho fantatra hoe mpanoratra ny asa nalefany.
Teknolojia sy Fifandraisana
Nitombo ny fifandraisana ary hitohy ny fanaovana izany amin'ireo volana manaraka, satria mpamatsy serasera roa goavana no ho avy ao Myanmar amin'ity taona ity: ny vondrona Norveziana Telenor  sy ny Ooredoo  avy ao Qatar.
Niatrika fahasahirana lehibe ihany koa i Nguyen tao anatin'ny tontolon'ny teknolojia ao Myanmar: ny endri-tsoratra malaza indrindra teo amin'ireo vohikala amin'ny fiteny birmana, antsoina hoe Zawgyi , dia tsy mifanaraka tamin'ny Unicode, izay nitarika ho aminà olana midadasika kokoa.
Ekipan'i MySquar miasa (Rita Nguyen, eo afovoany)
Fijerena toerana sy Fandaharana
Mety ho tena manan-danja ny fampifanarahana an'ireo tetikasa teknolojika amin'ireo kolontsaina eo an-toerana mba hahaliana an'ireo mponina eo an-toerana, mila fahazoan-kevitra mikasika izay tiana sy irian'ireo mponina eo a-ntoerana.
Hita manontolo ao amin'ny teny Birmana ny MySQUAR saingy, hoy i Nguyen manipika, ho lasa lavitra noho ny fandikànteny tsotra ny toerana misy azy.
Tao anaty fikarohany, nahita fironana malaza miavaka teny anivon'ireo tanora Birmana ny tarika MySQUAR mikasika an'ireo boky fitanana an-tsoratra ifampizaràna. Misy an'ireo faritra ho fenoina sy hifanakalozana amin'ny namana ireo boky ireo, mametraka fanontaniana momba ny tompon'ilay boky sy momba an'ireo fomba nihaonany, ary mety ho lasa boky feno saripika sy ireo kisarisary.
Taorian'ny nahitàna an'io fironana io, nanamboatra an'ireo toetoetra manokana mifandraika amin'izany ny tarika MySQUAR tao anaty vovonana, izay mampahatsiahy an'io boky an-taratasy io.
Amin'ny hoavy, mikatsaka ny hampiroborobo ao anatina tsena iray tsy an-drenivohitra ny MySQUAR, amin'ny fikarohana ireo fomba hanampiana ny Birmana izay mety ho tsy rototra amin'ireo tambajotra sosialy nefa afaka maka tombony amin'ny teknolojia mba hanatsarany ny fari-piainany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/20/121279/
 araka ny Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Burma#Internet